Umshini isivalo Ukugunda iyiphi uwayehlalise. Anikholwa - uzibonele
Umshini isivalo for ukuwafaka muva nje kwavela futhi zehlulekile ukunqoba izinhliziyo kukhona nabesifazane ababemkhalela, zijwayele version standard nge tin zamabhodlela noma plastic. Zingamashumi, Uma unganakile, eziningi ezibizayo. Ukuze ubone uma elibiza powder wadutshulwa washona, udinga ukwenza ezinye izibalo. Futhi babonisana ukuthi uma ungenawo uzisole imali ukuze ufunde ukuthi awasebentise, hhayi ukulahlekelwa izinga, ngokuhamba kwesikhathi kuyokhanya - ikhava cleaner liyinketho ukonga kakhulu.
Ningakholwa izinga yabo? Hlola ku nelwatinchanti lwabo
Uma sithatha ku-akhawunti, le divayisi ekhishini - esebenza e imigomo yokusetshenziswa zingawuhawukeli omunye imali isikhathi umkhiqizo izinga, une isikhathi eside ukuba bayakhohlwa ukuthenga tin zamabhodlela. ikhava ngayinye ikwazi ukuqhubeka iphila ezingamakhulu amabili closings, nokuthi impilo inkonzo okungenani iminyaka emithathu.
Ngokuvamile atholakala amasethi okudayiswayo wezingane ezintathu, eziyisishiyagalolunye noma ngaphezulu CAPS kanye futha ekhethekile. Ungathatha iqoqo ubuncane ukuhlolwa ukuhlola izinzuzo futhi baqonde indlela yokubhekana nazo ngokuphumelelayo futhi Bazama ukukwenza lokho azitholile ngenxa ilungele ukuvunwa 'uhlelo basishiye. " Lokho, ikhava cleaner nge futha ungakwazi futhi kumele ithengwe ukuze uqale njengoba uphenyo.
Ukuze uqale ukugxila yokuthi ofeleba ezinjalo zisetshenziswa kuphela ingilazi izimbiza. Ayikho enye esitsheni ube nentamo efanelekayo (ithini plastic) ayifanele Kulokhu.
Ngokulandelayo, ukuqinisekisa ubuqotho ikani. Kumele baqonde ukuthi ukudala i-cleaner usuke udale Umfutho ongaphakathi, okuyinto leliphasi kunaleyo imvelo. Ngakho, ungase uqhekeke futhi chips kungase kube nomthelela yokuthi ibhange uyophahluka. Futhi ngenxa yokuthi asifuni ukuthi, angithi? Ngakho ahlole ngokucophelela embizeni ukuze zamehlo.
Ngokwemvelo, kufanele izimbiza zamabhodlela inzalo ngaphambi kokuvala. Okulandelayo, cindezela ngokuqinile ukumboza entanyeni, hhayi ngaphansi uvalwe ku futha. Ukuthatha inkinobho isibambo, ukuhambisa yentonga phezulu naphansi nje akasafuni angesabi iqala ukubuyela phansi. Lokhu kungenziwa kubhekwe njengento kwaqedwa lokuvala. Uma unazo umkhuba, inqubo kuzothatha ekuqineni imizuzu emibili. Uma futha eseke entweni nokongiwa - amanzi okugqumisa tincetu ujamu, njll, udinga ukususa ke off ngamanzi afudumele.
Kulula nje kuphela eduze, kodwa ovulekile
Ukuvula ukulondolozwa, okuyiwona esetshenziswa ikhava cleaner, akudingeki yimuphi imishini. Vele phakamisa valve endaweni lapho futha iqinile, emoyeni uthola ngaphakathi kwezimbiza kanye isivalo kuvula kalula.
Practical ukuthi ngisho nokuvula ukhukhamba yasebhange, isibonelo, ungavala kubo futhi usebenzisa ikhava efanayo, futhi ngaleyo ndlela waphinda ukunweba ukuphila kwabo eshalofini.
Umshini isivalo - I-ukuwafaka kanye kuphela?
Mayelana esebenza wakhuluma. Inzuzo ukuthi ine phezu ezivamile cleaner ikhava, in the yokuthi kuba esebenzayo hhayi kuphela for ukulondolozwa. Nge devaysa enjalo unga ngisho esitolo ukudla esiqandisini. Kuyaziwa ukuthi umoya-mpilo kubi ukuze kulondolozwe yikuphi ukudla, kungaba ezimanzi noma ngokudlulisa kungaba izinhlanzi, izithelo noma imifino ezaziwayo. Umshini isivalo ngoba namakani lizovikela nomsoco kanye ukubambezela yonke inqubo ukuwohloka. Uma adherent kuphela ukumisa noma esitolo ukudla epulasitikini, ngeke kube nzima ukukholisa, kodwa kungenzeka. Ukuze ezinye kungase kubonakale kunzima ukugcina ushizi, inyama noma izithelo emabhange Ngibambeni. Okuwukuphela agumenti - cleaner isivalo ikuvumela ukugcina ukudla isikhathi eside. Asikho isidingo ukwenza lokho ngaso sonke isikhathi, ukusizakala ngale ndlela yokugcina isikhathi sokuhamba, isibonelo.
Ukuze imikhiqizo ngobuningi, izinongo, ikhofi noma itiye, futhi, cap esinjalo singabiza isixazululo enkulu. Umoya ngeke zingene kule esitsheni nge izinto ezinjalo, futhi ngeke kuphume kuzo. Nale ukulondolozwa zonke ngamakha basakaza izinongo, ngeke zingene umswakama, ngenxa yini ungesabi zezinkinga isikhunta, ukudla kudliwa , njll
Ngisho izidakamizwa lobuchwepheshe ezifana upende, ukuvenisha, iglu, ongasindiswa omiswe okusheshayo. Kuyadingeka ukuqonda ukuthi kwenzeka ukungcoliswa akunakwenzeka ukuba aesthetically olumnandi zisebenzisa ikhava futhi.
Lava Grill - izici jikelele, ububanzi
Imishini Professional emakhishini - Izindlu wokuwasha
Indlela ukuhlanza umzimba ekhaya
Siwasebenzise kwesikhumba - kuyini? Ubangela ububomvu kwesikhumba
Oda Obungane Abantu: Umlando
Ukuhlaziywa enkondlo "Oh, Ngifuna kakhulu ukuphila"
Neziqubu nokuzibhaxabula - kuyindlela ekupheleleni noma masochism engokomoya?
Alexis (umculi): Biography, umsebenzi nomkhaya
Diffie-Hellman algorithm: aphoyintimenti